watchOS - အိုင်ဖုန်းသတင်းများ အိုင်ဖုန်းသတင်း
watchOS သည် Apple Watch operating system ၏အမည်ဖြစ်သည်တစ်နေ့တာအတွက် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ဟုဆိုသည့်ပန်းသီးစမတ်နာရီ iOS ကဲ့သို့ WatchOS သည်လည်း Apple Watch ၏အင်္ဂါရပ်များကိုတိုးတက်စေပြီး bug များကိုပြုပြင်ပေးသည့်ပုံမှန် update များကိုလည်းရရှိသည်။
watchOS 2, Apple Watch ၏အကောင်းဆုံး
WWDC ၂၀၁၅ တွင်တင်ပြသည်၊ watchOS2Apple Watch ၏အင်္ဂါရပ်များသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ ၎င်းသည်အဓိကတီထွင်မှုများအနေဖြင့်၎င်းသည်ဇာတိ application များဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်း၊ ခိုးယူမှုမှကာကွယ်ရန်ကုဒ်နံပါတ်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ Apple Watch ကိုအားသွင်းနေစဉ်သို့မဟုတ်တက်ကြွ။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်စက်များအား၎င်းအားစားပွဲနာရီအဖြစ်အသုံးပြုရန်နည်းလမ်းသစ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အားလုံးရှာဖွေပါ watchOS မှာဘာအသစ်လဲ Apple Watch နှင့်၎င်း၏လှည့်ကွက်များအတွက်ပါ။
Apple Watch သည် watchOS9နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
iOS 16၊ iPadOS 16 နှင့် ဟုတ်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင် watchOS9အသစ်တစ်ခုရှိသည်။ Apple Watch အတွက် လည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်တစ်ခု...
Apple က WWDC9 မှာ watchOS 22 အသစ်အားလုံးကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
Apple သည် watchOS9ကိုတရားဝင်ပြသခဲ့သည်။ မျိုးဆက်သစ် Apple Watch များ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ သတင်းကောင်းများ ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Apple Watch Series3သည် watchOS9နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
Apple သည်3ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Apple Watch Series 2017 ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်၊ ဤမော်ဒယ်သည်...
WatchOS 8 beta2တွင်ပုံတူမျက်နှာအသစ်ပေါ်နေသည်
ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လကကျင်းပခဲ့သော WWDC21 တွင် Tim Cook နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည်ငါတို့အားအသစ်တစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။
watchOS 8: ပိုမိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါမှု
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
watchOS 8 ကို WWDC 2021 တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးသတင်းကို Activity, Training မှ ...
WatchOS4developer beta 7.1 ကိုဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က iOS4beta 14.2 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြောင်းသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Apple က iOS နှင့် iPadOS 14.2, watchOS 7.1 နှင့် tvOS 14.2 ၏ပထမဆုံး beta ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်သည်
တရက်အကြာတွင် Apple သည် iOS, tvOS, watchOS ဗားရှင်းသစ်ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
watchOS7သည်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အမြဲတမ်းကွင်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
မနေ့က "Times Flies" တင်ဆက်မှုမှာ Apple က iOS 14, iPadOS 14, tvOS အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
လက်ဆေးခြင်းသည်ထင်ရသလောက် ပို၍ အရေးကြီးသည်
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
Apple ကနောက်ဆုံး WWDC တွင် Apple Watch အတွက် feature အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကင်းစောင့်သည်ကျွန်တော်တို့ကို watchOS တွင်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြသည်
Apple Watch သည်ထုတ်လွှင့်ပြီးကတည်းကတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လာမည့် Apple Watch Sleep Tracker ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု - အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေး၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။
por Tony Cortes လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
လာမည့် Apple Watch Sleep Tracker ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု - အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေး၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ယနေ့ 9to5Mac သည်…